Iingcebiso zokwenza indawo yokuhlala ufudo ekhaya | Ngeentlanzi
Abantu abaninzi, endaweni yokuba neenja, iikati okanye ezinye iintlobo zezilwanyana zasekhaya, bakhetha ukuba nazo Ufudo ekhaya, kuba ngokoluvo lwakhe ezi zilwanyana zizolile kwaye kulula ukuzigcina kunaso nasiphi na esinye isilwanyana. Kwangokunjalo, abazali abaninzi bakhethela abantwana babo ezi zilwanyana, ukubafundisa intlonipho nokuzinikezela ekufuneka umntu enako kwizilwanyana, kwaye abafundise olona xanduva.
Kungenxa yesi sizathu, ukuba nonke nina nigqibe kwelokuba nofudo ekhaya, siniphathela ingcebiso inyathelo ngenyathelo, yenza indawo yokuhlala yendalo yezilwanyana zabo ekhaya. Ukwenza le ndawo yokuhlala siza kufuna ezi zinto zilandelayo: umhlaba esiwusebenzisa egadini (ngaphandle kwesanti), amanzi, amagqabi, izityalo ezifana ne-purslane, okanye enye into engenatyhefu kwezi tyhefu.
Eyona nto ibaluleke kakhulu xa usenza le ndawo yokuhlala yendalo kukugcina ukuba Ufudo zizirhubuluzi, ke bafuna idosi yemihla ngemihla yokukhanya kwelanga. Eyona nto intle kukuba sisilwanyana esigqiba ekubeni sithathe ilanga, ngoko ke kufuneka sishiye icala lale ndawo imnyama, ngelixa elinye lishushu. Ngendlela efanayo, kuxhomekeke kwimozulu yendawo ohlala kuyo, unokufuna isibane esenziwe ngumntu okanye hayi.
Gcina ukhumbula ukuba umhlaba uyi eyona nto ifanelekileyo yofudo, ukusukela ukuba xa ubalahlekile kwaye ubenazo kwiindawo ezingezizo ezine-asphalt, oko kunokubangela iingxaki kwimilenze yabo kwaye kubangele ukuba iinzipho zabo zaphuke. Kubalulekile ukuba sihlale sinomhlaba kwindawo ezihlala kuyo ezi zilwanyana kwaye kuhlala kufumile ukulinganisa indawo ezihlala kuyo.
Ngokukhawuleza ndi emajukujukwiniKuya kufuneka ukhumbule ukuba ngokuxhomekeke kwinani lofudo onalo, kufanele ukuba likhulu, ukuba unesibini kuphela, unokukhetha ipleyiti okanye ichibi ngaphezulu okanye ngaphantsi kobukhulu obuphakathi. Khumbula ukuba awunakushiya ezi zilwanyana imini yonke elangeni ngaphandle kwendawo yokufuma njengoko zinokufa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ufudo » Iingcebiso zokwenza indawo yokuhlala ufudo ekhaya